Yin Htet Htet Ka See Hnin Than
Uploaded by lwanthu
………. E book
…………… ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ လုံးချင်းဝထ္ထု
ဲားတဲ့ ....
Aတိတ်တွေကပဲ မြန်လွန်းတာလား ။ Aနာဂါတ်တွေကပဲ နှေးလွန်းတာလား ။ ဘာမှန်းမသိတဲ့
ွ်သွားခဲ့သည်
Aနည်းငယ်Aတွင်း ၁၀ တန်းတက်ရပေတော့မည် ။ သူပျင်းရီစွာ ရေးလက်စ ကဗျာစာAုပ်ကို
ပိတ်လိုက်သည် ။ နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ညနေ ၄ နာရီ ။ ဒီAချိန်ဆို ဟိုကောင်တွေAုပ်စု
လမ်းထိပ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ ရောက်နှင့်နေလောက်ပြီ ။ Aိပ်ရာထက်မှ AလူးAလဲထ၍
ပျင်းတာကို လူလုပ် ....
thettantcho.com .4 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ " ဟေ့ကောင် သက်တန့် နောက်ကျလှချည်လား Aိပ်ပုပ်နေတယ်ထင်တယ် ဟုတ်လား " ကျော်ကြီးခေါ် ကျော်ငြိမ်းက လှမ်းမေးသည် ။ သူ့ဘေးမှာတော့ ဌေးေAာင် ၊ လှမိုး ၊ ၀တုတ်တို့ ထိုင်နေကြသည် ။ သူတို့ Aုပ်စုက စုစုပေါင်း ၅ ယောက် ရှိသည် ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျောင်းAတူတူ မှုလတန်း ၊ Aလယ်တန်း ၊ Aထက်တန်းထိတိုင်ေAာင် တက်လာခဲ့သည် ။ "ေAးကွာ ပျင်းလို့ကဗျာရေးနေတာ Aခု မင်းတို့ရောက်နေလောက်ပြီ ထင်ပြီး ထွက်လာတာကွ” ပြောပြောဆိုဆိုဆို ကျနော်ထိုင်ခုံကို လှမ်းဆြွဲ ပီးထိုင်လိုက်သည် ။ လှမိုးက " ညီလေးရေ ပေါ့ဆိမ့်တစ်ခွက်ဟေ့” ဟု စားပွဲထိုးကို လှမ်းမှာသည် ။. “ နောက်တစ်ပတ်ဆို ကျောင်းပြန်တက်ရတော့မယ်နော် ၁၀ တန်းတက်ရမှာ တစ်မျိုးကြီးပဲကွာ ရင်တုန်သလိုလိုပဲ” ဟု ကျနော်က ဆိုလိုက်ရာ ၀တုတ်က “ သက်တန့်ရာ မင်းက Aကုန်လုံးကို လိုက်ပြီး ရင်တုန်နေတာပဲနော် သူ့ဘာသာ ကျောင်းပြန်ဖွင့်တာတောင် ရင်တုန်ရတယ်လို့ ဟွန်း” “ေAးပေါ့ဝတုတ်ရ မင်းကတော့ စားစရာတွေ့မှ ပဲရင်တုန်တာမဟုတ်လား” ဟု ဆိုလိုက်ရာ ရယ်ကျဲကျဲပြန်လုပ်နေသည် ။ ရောက်လာသော လက်ဖက်ရည်ကို ဘာရယ်မဟုတ်ငေးစိုက်ပြီးကြည့်နေမိသည် ။ ဒီလိုနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး သူငယ်ချင်း တွေနဲ့လမ်းခွဲပြီး ပြန်လာခဲ့သည်။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ ။ Aိမ်ပြန်ရာ လမ်းတလျောက်မှာ ပျင်းရိဖယ်ွကောင်းသောကမ္ဘာကြီးထဲ AရာAားလုံးသည် တစ်ဖန်ပြန်ဝင်ရ ပေAုန်းတော့မည် ။ http://www.blogspot.
thettantcho.com .5 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ ဒီနေ့ ကျောင်းသွားAပ်ရပေတော့မည် ။ စိတ်ထဲ ထူးထူးခြားခြား တုန်လှုပ်မှုတော့မဖြစ်ခ့ေဲပ ။ သူက ခြောက်တန်းနှစ်ကတည်းက ပုံမှန်သာ စာကိုကြိုစားခဲ့သည် ။ ထူးထူးခြားခြားကြီး ပျံလန်နေေAာင်တော့ မကြိုစားခဲ့ ။ Aတော်Aသင့်သာစာကျက်ခြဲ့ ပီး ၆ တန်းမှ ၉ တန်းAထိေAခန်းသာ ရရှိခဲ့သည် ။ ၁၀ တန်းမှာရော ဘာAခန်းရမည်နည်း ။ သိပ်တော့ စိတ်ဝင်တစားမဖြစ်ခဲ့ပေ ။ ကျောင်းဝင်းထဲကို စ၀င်လိုက်တော့ မွန်းကျပ်ဖယ်ွရာ လူAုပ်ကြီးကို စတင်တွေ့လိုက်ရသည် ။ လူAုပ်ကြီးက နဲနဲနောနောမဟုတ် ။ သူစိတ်ပျက်စွာ ငေးမောကြည့်နေမိသည် ။ နောက်တော့ လေးလံသော ခြေလှမ်းတွေက ကျောင်းဝင်းထဲသို့ Uီးတည်လာခဲ့သည် ။ ဘေးဘီကို ဝေ့၀ြဲ ကည့်လိုက်ရာ ကျောင်းသူ ၂ Uီး၃Uီးက မျက်နှာမကောင်းကြ ။ ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေသည် ။ Aင်း Aခန်းနောက်ဆုတ်သွားလို့ ဖြစ်နိုင်သည် ။ လူAုပ်ကြီးကြားထဲမှာ လှမိုးကို လှမ်းမြင်လိုက်သည် ။ သူ့ကိုမြင်တော့ လူAုပ်ကြားထဲမှ တိုးထွက်လာခဲ့သည် ။ ကြည့်ရသည်မှာ ရုပ်ရှင်ရုံ လွှတ်ပြီး ပြန်တိုးထွက် လာကြည်သည်နှင့်တူသည် ။ နဲနမှဲ သက်သက်သာသာမရှိလှ ။ လှမိုးလည်း Aပြင်ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင် Aသက်ကို မနဲဝေAာင်ရှုနေသည် ။ စကားတော့မပြောနိုင်သေး ။ Aတန်ကြာေAာင်Aမော ပြေပြီးတော့မှ “ သက်တန့် မင်းAခန်းသိရပြီလား ငါတော့Aခန်းကျသွားတယ်ကွာ စီခန်းပဲရတယ် ဇင်မာနဲ့တော့လွဲပါပြီကွာ သူက ဘီခန်းရောက်သွားတယ်ကွ” ဒီကောင်က သူကြိတ်ပိုးနေသည့် ကောင်မလေးနှင့် Aခန်းကွဲသွားသည့်Aတွက် ၀မ်းပမ်းတနည်းဆိုသည် ။ ရှိစေတော့ ။ “ေAးကွာ လူကလည်းများလိုက်တာ ဘာလို့ဒီလောက်တောင်များနေရလဲ မသိပါဘူး ဘယ်Aချိန်Aပ်Aပ်ဒီAခန်းပဲဟာကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားရေAာင်ကွာ ပြီးမှပြန်လာမယ်” ကျနော်ဆိုလိုက်တော့ လှမိုးကမငြင်း ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖက်သို့ ခြေလှမ်းကို စတင်လိုက်သည် ။ http://www.blogspot.
thettantcho.blogspot..com ..6 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ (၂) ရုတ်တရက် Aနောက်မှ လူကယိုင်ထွက်သွားသည် တစ်စုံတစ်ခုကဆောင့်ပြီး ။ တစ်ဖက်မှဝင်တိုက်သည့်လူက လူက သူ့ကို ခါးနားမှ ဂရုပင်မစိုက်ပဲ တွန်းလိုက်သလို ဖြစ်ပြီး Aတော်လေးနာသွားသည် ။ ဆက်၍ ။ ထွက်သွားခဲ့သည် ကျနော်လည်း ဒေါသထွက်ထွက် နဲ့ “ဟေ့ကောင်ခဏနေUီး” ဆိုပြီး လက်ကို ပါလာခဲ့သည်။ လှမ်းဆွဲလိုက်သည် ဟိုက် ။ ထိုလူက AသေAချာကြည့်မိတော့မှ ယိုင်န့စွဲာ သူလှမ်းဆွဲသည့်ဖက်သို့ မိန်းမကလေးဖြစ်နေမှန်းသိသည်။ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ဘယ်သိမလဲလေ ။ သူက ယောင်္ကျားလေးပုံစံဝတ်ထားတာကိုး ။ “မင်း ယU်ကျေးမှုAတော်နဲတဲ့ ဒေသကနေလာတာထင်တယ် လူတစ်ယောက်လုံးကို လဲကျသွားေAာင်ဝင်တိုက်ပြီးမှ တောင်းပန်စကားဆိုရတဲ့ ထုံးစံကို မသိဘူးလား ကွ” “ ရှင်ရော မျက်စိမပါဘူးလား လူတစ်ယောက်လုံး Aမြန်လာတာကို ဘာကိုငေးနေမှန်းမသိ Aတော်Aူကြောင်ကြောင်နဲ့ဟွန်း” “ ဘာကွ ငပြူးကပဲ ပြန်ပြဲပြနေသေးတယ်” “ ရှင်မိုက်ရိုင်းလှချည်လား ဘာပြဲတာလည်း” “ စကားပုံကိုပြောတာကွ ဒါတောင်မသိဘူးလား တောက်.” “ ရှင်ကဘာမို့တောက်ခေါက်တာလဲ ဒီကမ္ဘာမှာကျမကို တောက်ခေါက်ရတဲ့သဲူ ဘယ်သူမှမရှိ ဘူး မှတ်ထား” http://www.
.thettantcho.မင်း မိန်းကလေးဖြစ်နေလို့ သက်သာသွားတယ်မှတ်ပါ” “ေAာင်မာ ရှင်ကများ ဒီမှာ ရှင်လကျဲတဲ့Aတွက် ဘယ်လောက်လျော်ကြေးပေးရမလဲ ရော့” ဟုဆိုက လက်ထဲက ထောင်တန်တစ်ဆုပ်ကို ဟန်ပါပါပေးနေသည်။ ကျနော်လည်း ထိုထောင်တန်ကို ကြည့်ပြီးစိတ်ထကဲAတော်တော့ဖုသွားသည်။ ကောင်မလေးကို ငေးကြည့် မိတော့ နှုတ်ခဲလေးက နီရဲငုံထွေးပြီး ဖူးဖူးလေးနဲ့ သူ့ကို ဒေါသထွက်နေသည်မှာလည်း မပြေသေးသည့်ဟန်ပင် ။ လူတွေကလည်း ၀ိုင်း ပြီးAုံကြည့်နေကြသည်။ Aရပ်ကတော့ သူနှင့်မတိမ်းမယိမ်း AသားAရေက ဖြူဖွေးနေပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကိုငုံကြည့်လျင် ဆီးနှင်းပွင့်လေးတွေနှင့်တူသည်။ စိတ်ထကဲတော့သူ့ကို “ ဆီးနှင်းဖြူ” ဟုကိုယ့်ဘာသာနာမည်ပေးလိုက်သည် ။ " ဒီမှာ ရှင့်ကို Aလျော်ပေးနေတာ မယူဘူးလား နားလည်းလေးနေတယ်ထင်တယ်" ကျနော်ငေးကြည့်နေမိတော့ကောင်မလေးက စိတ်မရှည်စွာ ဆိုသည် ။ " မင်းတကယ်Aလျော်ပေးချင်တာလား" " Aင်းပေါ့" ဟုဆိုပြီး ထောင်တန်တွေကို ရှေ့သို့ တိုးပေးသည်။ ကျနော်လည်း ဘာမှဆက်ပြောမနေတော့ပဲ ကောင်မလေး လက်ကိုဆွဲယူကာ တီးတိုးသင်ပေးလိုက်သည် ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိAနူးညံ့ဆုံး နီရဲနေသော မျက်နှင့် ကျနော့်ကို ကဗျာ တစ်ပုဒ်ကို တAံ့တသြကြည့်ပြီး Aနောက်ဖက်သို့ပြန်လည်ပြေးထွက်သွားခဲ့သည် ။ http://www.7 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ “ ဘာကွ မင်းကိုတောက်မခေါက်ရဲရေAာင် မင်းကဘုရင့်သမီးတော်မို့လို့လား ငါကွာ” “ေAာင်မာ လုပ်ရဲလုပ်ကြည့်စမ်းပါ ဟွန်းမီးတောက်သွားမယ်” “ ငါကွာ..com .blogspot.
.com .8 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ ဆီးနှင်းဖြူရယ်…...... Aဲဒီ တိမ်တိုက်တွေထမှဲာ.. သင်ကြားပေးမယ်. ပိုးသားဇာဝတ်ရုံကိုခြုံပြီး. လှပတဲ့ တေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်.ချစ်ခြင်းကဗျာတွေ.thettantcho. Eဒင်UယျာU်က ပန်းတွေပွင့်တ့တဲစ်နေ့.. ငါ့ရဲ့... ရင်ခုန်ခြင်းရဲ့ကျောင်းတော်ထမှဲာပေါ့.... (သက်တန်ချို) AခြေAနေက ကြသည် ရုတ်တရက်ကြီးဖြစ်သွားသည့်Aတွက် ။ ကျနော်က ကျောင်းAပ်ပြီးတော့ မထူးခြားသလိုပါပဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ ရသည့်Aခန်းက ။ ကြည့်နေ လူAုပ်ကြီးကြားထဲတိုးဝင်လာခဲ့သည်။ေAခန်းတဲ့ လာမည့်တနင်္လာနေ့ပေါ့ Aကုန်လုံးကြောင်ပြီး ။ ။ Aင်း သိပ်ပြီးတော့လည်း ကျောင်းတော်ကြီးသို့ တစ်ခေါက်ပြန် ရောက်ပေUီးမည်။ ညနေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းထားသေးသည် ။ ထုံးစံAတိုင်း လက်ဖက် ရည် ဆိုင်မှာပင်ဖြစ်သည်။ ရုတ်တရက် Aတွေးကောင်းနေတုန်းမှာပင် မိုးက ၀ုန်းကနဲ သည်းကြီးမဲကြီး ရွာချလိုက်သည် ။ ဒါပေမယ့် ကောင်းကင်ကို Aမှတ်တမဲ့ကြည့်မိလိုက်တော့" ဆီးနှင်းဖြူ" ရဲ့ မျက်နှာဖူးဖူးလေးကို လှစ်ကနဲတွေ့လိုက်ရသည်။ မိုးရေထဲမှာပင် Aိမ်သို့တန်းပြန်လာခဲ့သည်။ သူကတော့ ထုံးစံAတိုင်း ဘယ်တော့မှ ထီးကို ယူဆောင်လာလေ့မရှိပေ ။ ထီးဆောင်သွားရမည့်Aလုပ်ကို သူAပျင်းရိဆုံးဖြစ်သည် ငယ်စU်ကတည်းကို ။ သူ မိုးရေစက်တွေထမှဲာ Aနှစ်သက်ဆုံးပင် လမ်းလျောက်သွားရသည့် ။ ထို့ကြောင့်ပင် Aရသာကို ဖျားနာခဲ့ရသည့် Aကြိမ်းပေါင်းလည်း မနဲတော့ပြီ ။ သူကလည်း ဘယ်တော့မှ Aမှတ်မရှိ ။ ဒီလိုပါပဲ သူက သူနှစ်သက်လျင် သူ့ကို ဒုက္ခပေးသည့်Aရာကိုတောင် မက်မက်မောမော ဖက်တွယ်တတ် သည်ပဲလေ ။ http://www.....blogspot....
com .blogspot.9 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ "ဟဲ့သား ဒါကဘယ်ကို ပြန်ထကွ်Aုန်းမလို့လဲ ညနေတိုင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်လိုက်နဲ့ ဟွန်း နင်နော် Aတော်ခြေများနေတယ် မပြောချင်လို့နေနေတာ Aကောင်း မှတ်နေတယ် ဟုတ်လား" " Aာ Aမေကလည်း AထူးAဆန်းလုပ်လို့ သွားပြီ" သူနောက်သို့ လှည့်ပင်မကြည့်ပဲ တစ်ချိုးတည်းလစ်ခ့သဲည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်တော့ လှမိုးကလွဲ၍ ဘယ်သူမှမရောက်သေး ။ " လာသက်တန့် ငါလည်း Aခုလေးတင်ရောက်တာ ညီလေးရေ ပေါ့ဆိမ့်လုပ်Uီးဟေ့" ပြောပြောဆိုဆို လှမိုးက ခုံတစ်ခုံလှမ်းပေးသည် ။ သူလည်း ခုံကိုလှမ်းယူ၍ ထိုင်လိုက်သည် ။ ခဏကြာတော့ ဟိုကောင်တွေAကုန်လုံး Aလျှိုလျှိုရောက်လာကြသည် ။ စကားဝိုင်းလေးကနဲနဲစိုပြည်သွားသည်။ " ဒါနဲ့နေစမ်းပါUီး သက်တန့်ရ မင်းနေ့လည်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ကွိုင်တက်သေးတယ်ဆို ဟုတ်လား" "ကွိုင်တက်ရေAာင်ငါက လျှပ်စစ်မီးဖိုမှမဟုတ်လာ ကွိုင်လည်းမတတ်ဘူး ကွိုင်လည်း မပျက်ဘူး Aကောင်းကြီး” “ Aာ ဒီကောင်Aကောင်းမေးနေတာကို မင်းနေ့လည်က မိန်းကလေးတစ်ယောက် နဲ့ပြသာနာတက်တယ်ကြားလို့ ဟုတ်လားလို့” “ ပြသာနာမဟုတ်ဘူးကွ Eဒင်UယျU်ကြီးရဲ့ နတ်သမီးတစ်ပါးကို Aမှတ်မထင်တွေ့လိုက်တာပါကွာ သူ့နာမည်က ဆီးနှင်းဖြူတဲ့” http://www.thettantcho.
..... တိတ်တိတ်လေးပဲ.blogspot......ဒီကောင်" လိုနဲ့ မုန့်တွေလာချပေးတော့ စကားဝိုင်းကခဏ ပြတ်တောက်သွားသည် ။ “ဘယ်ကနေဘယ်လိုစဖြစ်တာလဲ ပြောစမ်းပါUီး” “ ဒီလိုပါပဲ ..... ။ ခပ်မဆိပ်..။ http://www..thettantcho..com ..xxxxx” “Aဲဒီတော့ မင်းကဘာပြန်လုပ်လိုက်လဲ” “ ဒီလိုပါပဲ xxxxxx” “ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွာ Aဲဒီတော့ကောင်မလေးက မင်းကိုပါးမရိုက်သွားဘူးလား” “ နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်တော့ ရိုက်မယ်ထင်တယ်ကွ” ဟိုကောင်တွေမျက်နှာတွေ Aကုန်လုံး ရှုံ့မဲ့သွားကြသည် ။ ကောင်းကင်မှာ ငှက်Aချို့ ရေးကြီးသုတ်ပြာ ထွက်ပြေးသွားကြသည် ။ ကြည့်လိုက်တော့လည်း ပုံမှန်Aတိုင်းပင် . ဒီရင်ဘတ်ထဲက..... Aသဲနှလုံးတစ်စုံကို...... နင်ယူသွားတယ်..10 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ “ ဟမင်းကနာမည်ကို ဘယ်လိုလုပ်သိတာတုန်း” “ ငါ့ဘာသာပေးထားတာ” “ Aာ...
.thettantcho. ယU်ကျေးမှုတစ်ခေတ်ထနွ်းခဲ့တယ်... Eဒင်ရဲ့ သစ်သီးထဲမှာပေါ့.....11 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ (၃) ဘယ်နေရာတွေကမှန်နေသလဲ....... လေးလံတ့ေဲတာင်ပံရိုက်သံနဲ့....blogspot.... Aနမ်းတွေန့လဲမ်းဆန်းလို့.. ဒီလောကနိယာမတရားမှာ. Aစွန်ဆုံးကမ္ဘာUီးမှာ.. ငှက်တစ်ကောင်မဟုတ်တာတော့သေချာတယ်..။ (သက်တန့်ချို) ဒီနေ့ကျောင်းစတက်ရမည်မို့ ကြာနေပြီဖြစ်၍ မထချင်ထချင်နဲ့ ထလာခဲ့သည်။ ကျောင်းပြန်တက်ရတော့ ကျောင်းပိတ်ထားသည်မှာ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေခဲ့သည်။ ၁၀ တန်းဆောင်တွေဖက်သို့ ခြေလှမ်းကိုUီးတည်လိုက်သည်။ ဟော တွေ့ပါပြီေA ခန်းတဲ့ ။ သူနှင့် သူငယ်ချင်း ငါးယောက် Aခန်းတွေကွဲသွားခဲ့သည် ။ ဟို သုံးကောင်က စီခန်း သူနှင့်ေAခန်းမှ တူတာဆိုလို့ ကျော်ငြိမ်းတစ်ယောက်သာလျှင်ရှိသည်။ နဲ့ဝင်လာခဲ့သည်။ တွေမြင်ကာ ထိုAခိုက် “ခွပ်”ကနဲမြည်သံနှင့်Aတူ ဖင်ထိုင်ရက်လဲကျသွားခဲ့သည် ။ Aခန်းထဲသို့ ခေါင်းတစ်ခုလုံး ခေါင်းငိုက်စိုက် ကြယ်တွေလ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ရှေ့မှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက် နှဖူးလေးပွတ်ပြီး ငုတ်တုတ်လေးထိုင်နေသည်။ “ ဒီမှာ ရှင်ဘယ်လိုလူလည်း မျက်စိမပါဘူးလား ဟင်” ပြောပြောဆိုဆို ကျနော့်မျက်နှာကို AသေAချာကြည့်ပြီး မျက်နှာနီရလဲာခဲ့သည်။ နောက်စကားသံတို့ ဆွံAကာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်Aကြာကြီး စိုက်ကြည့်နေခဲ့သည်။ နောက်ဘာမှမပြောတော့ပဲ သူ့ခုံသို့ AသာAယာသွားထိုင်နေတော့သည် ။ ကျနော်လည်း Aခန်းထဲဝင်လိုက်ကာ ကောင်မလေးနားသို့ကပ်ပြီး “ကျနော်တောင်းပန်ပါတယ် ဆီးနှင်းဖြူ မျက်နှာကိုေAာက်ငုံ့ပြီးလျောက်လာလို့ မတွေ့လိုက်တာပါ” http://www.com ..
12 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ “ ရှင်ဘယ်သူ့ကိုပြောနေတာလည်း ကျမနာမည် ဆီးနှင်းဖြူမဟုတ်ဘူး” ဟုတ်သား ကိုယ့်ဘာသာစိတ်ထမှဲနာမည်ကို ခပ်တည်တည်ပြောပြီး သွားတောင်း ပန်နေမိသည်။ မင်းAတော်တုံးသေးတာပဲ သက်တန့် ။ “ဟို....စာAုပ်ကနာမည်ကိုလှမ်းကြည့်တာပါ နှင်းပွင့်ဖြူ..” စကားကိုရှေ့မဆက်ဖြစ်ပဲ ကောင်မလေး ရှေ့မှ စာAုပ်ကို ဖျက်ကနဲလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ကောင်မလေးက ရုတ်တရက် မျက်နှာပေါ်မော့လာကာ “ ရှင်ဘာကြည့်နေတာလဲ ဟွန်းရုပ်ကိုက Aူကြောင်ကြောင်နဲ့” “ ဟို.com .thettantcho.. ။ http://www...Aထင်မလွပဲါနဲ့ ကျနော်တောင်းပန် ပါတယ် ဟိုတစ်ခါကလည်း” “ Aို..ရှင်ဘာတွေပြောနေတာလည်း တော်တော့..blogspot....ဟို.xxxxxx” ကောင်မလေးက ချက်ချင်းမျက်နာနီရတဲက်လာသည်။ မိန်းမပျိုလေးတစ်Uီး၏ ၇ှက်သွေးစို နေသော ပါးပြင်လေးကို Aနီးကပ်ကြည့်ရခြင်းမှာ ဘယ်လိုကြီးကိုဖြစ်နေမှန်းမသိ ။ ဒါပထမဆုံးပင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခြေဖျားလက်ဖျားတွေေAးစက်နေမှန်းသတိထားမိလိုက်သည်။ Aရင်ကတစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးပါဘူး နှင်းပွင့်ဖြူရဲ့နောက်တစ်တန်းမှာ Eဒင်ရဲ့နတ်သမီးလေးကို တဖန်ပြန်လည် ။ ထိုAခိုက် ၀င်ထိုင်လိုက်သည် ။ သူပြန်တွေ့လိုက်ရသည်။ သာယာလာသည်ဟု ရင်ထမှဲာ သတိထားမိလိုက်တော့ ဘာဖြစ်တာပါလိမ့် ။ ဒါမျိုး Aတန်းပိုင်ဆရာမ၀င်လာ၍ တိုက်ပတဲိုက်ဆိုင်လနွ်းလှသည်။ ဒီလိုဆိုတော့လည်း ထင်မိပြန်သည် ။ ။ သူ့ရင်ထမှဲာ ကမ္ဘာကြီးက တိတ်တိတ်လေး ပေးထားတဲ့ကောင်မလေးနာမည်က ဆီးနှင်းဖြူ ။ ကောင်မလေးရဲ့ တကယ့်နာမည်Aရင်းက နှင်းပွင့်ဖြူ...
။ (သက်တန့်ချို) Aတန်းပိုင်ဆရာမက နာမည်ခေါ်ပြီး တစ်Uီးချင်းကို ထပြီးမိတ်ဆက်စေသည် ။ နှင်းဆီဖြူ Aလှည့်လည်းရောက်ရော " ကဲကဲမင်းတို့ကို ကျောင်းပြောင်း မိတ်ဆက်ပေးစရာရှိတယ် လာတာ သူ့နာမည်က နှင်းပွင့်ဖြူတဲ့ စာလည်းAရမ်းတော်တယ် Aခုမှ မင်းတို့Aားလုံး စာကိုကြိုးစားပြီးယှU်ပြိုင်ကြပါ ။ နှင်းပွင့်ဖြူကိုလည်း မောင်နှမတွေလိုစောင့်ရှောက်ပါ" ဟုဆ၇ာမကပြောသည် ဟုတ်တယ်လေ ။ စိတ်ထကဲတော့ မောင်နှမလိုတော့ တိတ်တိတ်လေး မစောင့်ရှောက်နိုင်ပါဘူး တွန်းလှန်လိုက်သည် ။ ။ မတော်နောက်ပိုင်းသူနဲ့ ရည်းစားတွေဘာတွေ ဖြစ်သွားရင်ဘယ့်နှယ့်လုပ်မလဲ ။ ကိုယ့်ဘာသာ တွေးပြီး ကြိတ်ပြုံးလိုက် မိသည် ။ ဆရာမကလည်း ဒါကို မြင်ဖြစ်ေAာင်မြင်လိုက်သည် ။ " ဟိုကောင်သက်တန့် ဘာပြုံးစိစိလုပ်နေတာလဲ ဆရာမပြောနေတာကိုနော်..ရဲ့ Aလှ... မင်းေAာင်ခ့တဲ့ မှော်Aတတ်နဲ့.. ငါက ပန်းလေးတွေပျိုးပေးယုံပါ... ခိုက်ခိုက်တုန်ေAာင်ပြုစား..13 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ ငါ့ရင်ခွင်ကို သိမ်းပိုက်..ဟွန်း Aချိုး ကိုပြင်ပါ" Aတန်းသားAားလုံးကသူ့ကို ၀ိုင်းကြည့်ကြသည် ။ Aားလုံးက ပြုံးစိစိဖြစ်ကုန်ကြသည် ။ နှင်းပွင့်ဖြူကတော့ သူ့ကို ကြည့်ပြီး မျက်စောင်းတစ်ချက်ကို လှလှပပကြီးထိုးသွားသည် ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ နဂါးမလေးရဲ့ မျက်စောင်းပေါ့ ။ http://www... ပန်းUယျာU်ကြီးထဲ... ဒီကကြိုးတွေဖန်ဆင်း.....blogspot.. နှင်းပွင့်ဖြူရေ.လည်း သက်ဆင်းခဲ့ပြီ..thettantcho.. ငါ...com . ဒီနတ်တစ်ပါး...
.blogspot.. သံစU်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ခ့မဲယ်ဆိုရင်..thettantcho.. မင်း....... ငါ့တေးသွားတွေ....ဖြူ (သက်တန့်ချို) ကျောင်းတက်တာ ရင်းနှီးခွင့်မရသေး Aခုဆို ။ ၂ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပတ်ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ သိလာရတာက ယခုထိကောင်မလေးနှင့် ကောင်မလေးက စာမှစာ ။ စာရူးရူးနေသလားမသိပေ ။ AားနေစာAုပ်နဲ့ မျက်နှာခွာသည်မရှိပေ ။ ကောင်မလေးနဲ့ ရင်းနှီးခွင့်ရေAာင်တော့ သူတစ်ခုခု ကြံဆောင်ရပေUီးမည် ။ နောက်ကောင်မလေးက Aတော်ချမ်းသာပုံလည်းရသည် ။ ကျောင်းသို့လာလျှင် ကားဖြူလေးနှင့် Aိမ်က လိုက်ပို့ လေ့ရှိသည် ။ ကိုယ်လည်းကားနှင့်ပြန်တာပါပဲ ။ သို့သော်ခြေထောက်ကို ကားခြင်းသာ ဖြစ်သည် ။ Aတော်တော့ကြည့်ရဆိုးမည်ထင်သည်။ Aရင်က ကျောင်းကို Aမြဲနောက် ကျလေ့ရှိသော သက်တန့်တစ်ယောက်ကို Aခုဆို ကျောင်းတံခါးပင်မဖွင့်သေး ။ ကျောင်း ရှေ့Aုတ်ခုံလေးမှာ လွယ်Aိတ်ကလေးပိုက်ပြီး Aမြဲမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်သည် ။ တစ်ချို့ကတော့ သူ့ကိုထူးဆန်းသလိုကြည့်သွားကြသည် စတက်ကတည်းက ကျောင်းသို့ ။ ဟုတ်လည်းဟုတ်သည်လေ စောစောလာသည့်ရက် သူ့မှာ မရှိခဲ့ ဒီကျောင်းမှာ ။ ဒီတော့လည်း Aထူးဆန်းသဖွယ်ဖြစ်နေတာကိုး ။ တစ်ချို့ကလည်း လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နဲ့ ပြုံးစိစိလုပ် သွားကြသည် ။ http://www...... ၀န်ရိုးစွန်းတစ်ဖက်မှာ. မင်းနှစ်သက်တဲ့ ချယ်ရီပင်လေးတွေ..14 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ Aဲဒီမျက်စောင်းတစ်ချက်က နှလုံးသားထဲကို စူးစူးနစ်နစ်ဝင်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ Aဲဒီတုန်း က မထင်လိုက်မိဘူး ။ (၄) ချစ်ခြင်းတွေသာ ..ပွင့်..... နှင်း.com ....ပျော်ရွှင်စေရမှာပါ. Aစွမ်းကုန်တောက်ပ နေလေရဲ့... ဆိတ်ဖလူးပန်းရနဲ့တွေနဲ့..
15 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ တစ်နေ့ Aဲဒီတစ်နေ့က သိလိုက်လျင်တော့ Aဲဒီနေ့က သူနှင့် ဆီးနှင်းဖြူတို့ကို ရင်းနှီးမှုမရသည့်Aပြင် မနက်စောစော ရင်းနှီးမှုရစေသောနေ့ ခါးသီးမှုတွေသာ ။ Aမှန်ကို ဆုလဒ်Aဖြစ်ရနိုင်သည် ကျောင်းသို့လာစောင့်နေသည်။ ။ နှင်းပွင့်ဖြူလေး.... နတ်သမီးလေးတစ်ပါးAလား ကြွကြွရွရွလေး လှမ်းလာနေသည်။ Aခြားမိန်းကလေးတွေနှင့် မတူသည့် Aချက်မှာ နှင်းပွင့်ဖြူက လမ်းလျောက်လျင် ဘေးဖက်သို့ဘယ်တော့မှ ကြည့်လေ့မရှိ ။ ရှေ့တည့်တည့်သို့သာ စူးစိုက်ပြီး ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လျောက်လေ့ရှိသည် ။ ဘေးဖက်တွင် မီးလောင်နေလျင်လည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး သိမည့်ပုံမပေါ်ပေ ဖြတ်ကျော်သွားသည်။ ဒါကလည်း ။ နှင်းပွင့်ဖြူက ထုံးစံပင် ။ သူ့ကို သူကလည်း ထုံးစံAတိုင်း သူမနောက်မှ ကပ်၍ လိုက်ပါလာခဲ့သည် ။ ခေါင်းထဲတွင် ဒီကောင်မလေးကို ကြည့်ရင်း Aသဲယားလာပြီး စချင်စိတ်ပေါ်လာသည်။ ကောင်မလေးရဲ့ လွယ်Aိတ်လေးထဲမှာ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ထွက်နေသော ကော်ပေတံလေး တစ်ချောင်းကို သူတွေ့လိုက်ရသည် ။ ဖြတ်ကနဲ ကောင်မလေးဘေးမှ ကပ်လိုက်နေရင်း ကော်ပေတံလေးကို မသိမသာဆွဲ ယူလိုက်သည်။ လူကလည်းကြပ်နေချိန်မို့ နှင်းပွင့်ဖြူက သတိပင်ထားမိပုံမပေါ်ပေ ။ ပထမတော့ Aပေါ်ထပ်တက်သည့် လှေကားတွင် ပေတံလေးကိုAသာAယာ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်မလို့ပင် ။ ကံတရားကလည်း ကိုယ့်ကိုမျက်နာသာ Aတော်ပေးပုံရလေ သည်။ Aပေါ်ထပ်လှေကားကို တက်သည့် Aချိန်ရောက်တော့ ကျောင်းသားAချို့က စရင်းနောက်ရင်း လူတွေကို တွန်းထိုးပြီးပြေးတက်သွားကြသည့် ။ လက်ထမှဲာ ကိုင်ထားသော ပေတံလေးက ရုတ်တရက် သူတို့တနွ်းလိုက်သည့် ထက်ဝက်ကျိုးသွားလေသည်။ ခေါင်းတွေပူထူသွားသည်။ ဟိုက် Aရှိန်ကြောင့် သောက်တလွဲ.blogspot..com . နှင်းပွင့်ဖြူကတော့Aခန်းဖက်သို့ နံရံကို ညပ်ပြီး ပြဿနာကတော့စပြီ ။ လျောက်သွားပြီဖြစ်သည်။ ရုတ်တရက်စU်းစား၍ မရသောကြောင့်ေAာက်ထပ်သို့ ပြန်၍ ဆင်းလာခဲ့သည်။ နောက်မှ သတိရသွားကာ ကျောင်းသက်သာချောင်ချီရေး Aရောင်းဆိုင်မှာ ဒီလို ကော်ပေတံလေးတွေ တင်ထားတာ Aကုန်လုံးက သူတွေ့ဖူးသည်။ ရုတ်တရက် ကြောင်ပြီးကြည့်နေကြသည်။ ပြန်လှည့်ကာ ပြေးဆင်းသွားသော ကျောင်းတက်ချိန်နီးလာပြီဖြစ်၍ သူ့ကို Aရှိန်ကို မြှင့်သထက်မြှင့်လိုက်သည် ။ http://www.thettantcho.
.16 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ ဆိုင်ကလေးသို့ေ၇ာက်တော့ ရုတ်တရက်မောနေ၍ ဘာမှမပြောနိုင်သေး ။ "ပေ.blogspot.Aရေးကြီးလို့ပါ" " မင်းတို့တွေဒီတိုင်းကြီးပဲ ကျောင်းသားဆိုတာ ပေတံဆောင်ထားရမယ်ဆိုတာ မသိဘူးလား ကွ" သူတိတ်ဆိတ်စွာ နေလိုက်သည်။ http://www...com .Aကြည်ရောင်လေး ရှိတယ်မဟုတ်လား " " ကုန်သွားပြီကွ " " ဗျာ..thettantcho.လုပ်ပါUီး Uီးလေးရယ်..ပေတံ " " ဟေဘာတုန်းကွ ပေတံလား " " ဟုတ်...." သူေAာ်လိုက်သော Aသံကြောင့်Uီလေးကြီးလည်း လန့်သွားပုံပေါ်သည်။ နောက်တော့ တစ်ခုခုကို စU်းစားမိသွားပုံဖြင့် " နေUီးကွ တစ်ချောင်းကျန်သေးလားမသိဘူး ရှာကြည့်ပေးမယ်" " လုပ်.ဟုတ်ကဲ့Uီးလေး" ဟု သူဆိုလိုက်တော့ Uီးလေးကြီးက ဘီဒိုကို ဖွင့်ကာ သစ်သားပေတံတစ်ချောင်း ထုတ်ပေးလေသည်။ " ဟာမဟုတ်ဘူး Uီးလေး ကော်ပေတံလိုချင်တာ Aရှည်လေ ဟို....
17 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ တစ်ခုခုပြန်ပြောလိုက်လျှင် Aချိန်ပိုကြာသွားနိုင်သည်။ Aတော်လေးကြာတော့မှ ကော်ပေတံ Aကြည်လေးတစ်ချောင်းကို လွယ်Aိတ်ထဲမှ ထုတ်ပေးသည်။ ထောက်ဆူးချွန်လေးကို သူလည်း ကျသင့်ငွေကို ထုတ်လိုက်သည်။ Aမြန်ရှင်းပြီး နောက်တော့ ပေတံAလွန်းလေးမှာ L O V E ဟူသော စာလုံးလေးAား ထွင်းလိုက်သည်။ေAာ်..com .ငါ့နှယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို Aတော်ရူးနေမှန်းAခုမှသိသည်။ ထိုAခိုက် ကျောင်းခေါင်းလောင်းထိုးသံကို ကြားလိုက်ရသည်။ သူ့ရဲ့ စိုးရိမ်ရေမှတ်က Aမြင့်ဆုံးသို့ေ၇ာက်ရှိသွားသည်။ Aခန်းရှိရာသို့ Aားသွန်ခွန်စိုက်ပြန်ပြေးလာခဲ့သည်။ ကျောင်းနောက်ကျလျှင် ထိုင်ထလုပ်ရမည်ဟု ဆရာမက Aမိန့်ထုတ်ထားသည်ကိုး ။ Aခန်းဆီသို့ရောက်တော့ Aခန်းတံခါးက ပိတ်ထားလေသည်။ ဟိုက် ဟုတ်သား ဒီနေ့ ဘိုင်AိုဆရာမAချိန်ပဲ ။ ဘိုင်Aိုဆရာမကိုတော့ သူတို့ တစ်တန်းလုံး တုန်နေေAာင်ကြောက်ရသည်။ သူကတော့ မတုန်ပါ ။ Aဲဒီလောက်ကြီးမှရုပ်မဆိုးတာကိုး ။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် နှင်းပွင့်ဖြူလေးAတွက် စိုးရိမ်သွားသည်။ သူမ မှာ ပေတံမှ ပါမသွားပဲ ။ ဒုက္ခနဲ့ လှလှန့ေဲတာ့ တွေ့တော့ပေမည် ။ Aခန်းတံခါးကို AသာAယာ ဆရာမခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ခေါက်လိုက်သည်။ တံခါးလာဖွင့်ပေးသည်။ ဟိုကောင်ကျော်ငြိမ်းက Aတန်းထဲရောက်တော့ AခြေAနေက သိပ်မကောင်း ။ မုန်တိုင်းက Aစပျိုးနေပြီဖြစ်သည်။ "ဟိုကောင်သက်တန့် ဘာလို့နောက်ကျနေတာလည်း Aဲဒီမှာ ရပ်နေစမ်း" " ဟုတ်.thettantcho...blogspot.ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ" ဆရာမက Aတန်းထဲဖက်သို့ လှည့်လိုက်ကာ " ကဲဘိုင်AိုAချိန်မှာ ဒီနေ့ ပုံဆွဲမယ် ခဲတံ ခဲဖျက် ပေတံ Aစုံမပါလာတဲ့သူ ကိုယ့်Aသိစိတ် နဲ့ကိုယ် ခုံပေါ်တက်ပါ" Aားလုံးက ဘိုင်AိုဆရာမAချိန်မို့ နှင်းပွင့်ဖြူလေး ခုံပေါ်တက်ပြီး ၀ိုင်းပြီးကြည့်နေကြသည်။ သတိထားပြီးယူလာကြပုံရသည်။ မတ်တက်ရပ်လိုက်သည်။ ဆရာမက ကြိမ်လုံးကို ထိုAခိုက် တစ်တန်းလုံးက ကိုင်ကာ သူ့ရဲ့ သူမကို နှင်းပွင့်ဖြူလေးဆီသို့ လျောက်သွားနေသည်။ http://www.
thettantcho. နှင်းပွင့်ဖြူရဲ့ ပေတံက ဒီမှာပါဆရာမ ကျနော်ကျောင်းလာတာနောက်ကျသွား လို့ပါ သူ့ဆီက ဌားထားပြီး ပြန်မပေးဖြစ်သေးလို့ပါ " ကျနော်က မထူးဆန်းသည့်ဟန်ဖြင့် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဆိုလိုက်တော့ နှင်းပွင့်ဖြူက Aံ့သြစွာ လှမ်းကြည့်နေသည်။ ကျနော်က ပြောပြီးသည်နှင့် နှင်းပွင့်ဖြူဆီသွားပြီး " ရော့နှင်းပွင့်ဖြူ ငါတောင်းပန်ပါတယ်ဟာ ပြန်ပေးဖို့မေ့သွားလို့ " ကျနော်က ခပ်တည်တည်ဆိုနေတော့ နှင်းပွင့်ဖြူက ကျနော့်ကို ရီဝေသော မျက်ဝန်းနက်လေး တွေနှင့် ပြန်ပြီးစူးစိုက်ကြည့်နေသည်။ ဒီလောက်ဆို လုံလောက်ပြီပဲလေ ။ " ကဲသမီးပြန်ထိုင်တော့ သက်တန့် မင်းမှာရော ပုံဆဖွဲို့ Aစုံပါလာလား" " ဟို. " ကျနော်လှမ်းေAာ်လိုက်တော့ Aားလုံး၏ Aကြည့်တို့က ကျနော့်ဆီသို့ စုပြုံပြီးရောက် လာကြပြန်သည်။ ဆရာမက ကျနော့ကို လှမ်းကြည့်သည်။ " ဟို...18 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ " ဆရာမ ခဏနေပါUီး ဆရာမ .com .blogspot.ဟို ပေတံ ကမ၀ယ်ရသေးဘူးဆရာမ" တကယ်လည်း ပေတံက မပါလာခဲ့ပေ ။ ဆရာမမျက်နှာက တဖြည်းဖြည်းနီရလဲာခဲ့သည်။ " ကဲဒါဆို မင်းAပြစ်ကို မင်းသိတယ်မဟုတ်လား စတော့ " ဆရာမက ဆိုတော့ သူလည်း ခပ်တည်တည်ပင် စတိတ်စင်ပေါ်သို့ တက်လာခဲ့သည်။ နောက်ထိုင်ထ Aခေါက် Aတော်ညောင်းသွားသည်။ သူ့ဆီသို့လာကာ ၃၀ ဒါက လုပ်လိုက်ရသည်။ နောက်ကျတဲ့ေAာင်မငီး Aပြစ် ပေတံမပါလာသည့်Aတွက်ဟုဆိုကာ ။ ခြေထောက်တွေ နောက်တော့ လက်ဝါးဖြန့်ခိုင်းပြီး ဆရာမက ငါးချက်ရိုက် လေသည်။ http://www...
" မျက်ရည်လေးဝိုင်းပြီး သူ့ကို စကားတွေတတွတ်တတ်ွဆိုနေသော ရှေ့မှကောင်မလေးကို မြတ်နိုးစွာ ငေးကြည့်နေမိသည်။ " ဟဲ့ ဖြေလေ သက်တန့် ဘာလို့လဲ ဘာလို့ နင့်ပေတံကို ငါ့ကို ပေးရတာလည်း .blogspot.... မျက်ရည်တွေဝိုင်းပြီး ရုတ်တရက် သူ့ကို ဆို့နင့်သွားသည်။ သူမ...ဘာကြောင့်ငိုနေရတာလည်း ။ (၅) "နင်ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်Aရတာလည်း သက်တန့် ငါAရိုက်ခံရမယ့်ဟာကို ဘာလို့ Aစားဝင်ခံပေးတာလည်း နင်....com .စောစောစီးစီး Aရိုက်ခံလိုက် ရင်ကောင်းသား ။ နောက်နေ့ရောက်တော့ ……… " ကဲကဲ မော်နီတာရွေးမယ်ဟေ့ မော်နီတာဘယ်သူလုပ်မလဲ" ထုံးစံAတိုင်း Aားလုံးက ကျနော့်ကို ၀ိုင်းကြည့်ကြပြန်သည်။ ဟုတ်လည်း ဟုတ်သည်။ ခြောက်တန်းမှ ကိုးတန်းAထိေAခန်းမှာ သူက Aမြဲတမ်း မော်နီတာ လုပ်ခ့သဲည်ပဲ ။ “သက်တန့်ပါဆရာမ” တစ်တန်းလုံးက ညီညာစွာရွတ်ဆိုကြသည်။Aတော်ချစ်ဖို့ကောင်းသည့်Aတန်းသားများပါပေ ။ http://www.တစ်နေ့တော့ ပြောပြမယ် xxxxxxxx" ကောင်မလေးက သူ့ကို ရီဝေစွာငေးကြည့်နေသည်။ နောက်နေ့မှစ၍ ကောင်မလေးနှင့်သူ Aရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့သည်။ေAာ်.19 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ Aရိုက်ခံနေတုန်း ကြည့်နေသည်ကို နှင်းပွင့်ဖြူလေးကို ကြည့်မိတော့ တွေ့ရလေသည်။ သူလည်း .." " ဒီလိုပါပဲဟာ..thettantcho.နင်.
..... မင်းတစ်ယောက်န့ပဲ သက်ဆိုင်ခ့တဲာ..နှင်းပွငြ့် ဖူ ကျောင်းတက်တာ တစ်လကျော်ပြီဖြစ်သည်။ သူမယောင်မလည် သွားကြည့်ဖူးပြီးပြီ ။ Aခုဆို နှင်းဆီဖြူလေးနေသည့် နှင်းပွင့်ဖြူလေးနှင့် သူ Aိမ်သို့ စာAကြောင်းပေ Aကြောင်းတွေ ကဗျာAကြောင်းတွေဆွေးနွေးပြီးခဲ့ပြီ ။ နှင်းပွင့်ဖြူလေးတက်သည့် ကျူရှင်မှာပဲ သူလိုက်တက်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုနှင့် ကောင်မလေးကို သူဆုံးဖြတ်လိုက်မိသည်။ သူနှင့်ကောင်မလေးတို့ Aဖြစ်မှန်ကိုတော့ ကောင်မလေးနှင့် တွေ့ဆုံပြီး Aတော့ကို ရင်းနှီးလာခဲ့သည်။ တစ်နေ့နေ့ဖွင့်ပြောမည်ဟု ပြန်လာခဲ့သည့် နေ့တိုင်း ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးပြီးမှ သူAိပ်လေ့ရှိသည်။ တစ်နေ့တော့ ကျူရှင်က Aပြန် “ သက်တန့် သဘက်ခါ ငါ့မွေးနေ့ ရှိတယ် လာခဲ့နော်ငါ သူငယ်ချင်း Aရင်းတွေပဲ ဖိတ် တာ ယောင်္ကျားလေးဆိုလို့နင်တစ်ယောက်ပပဲါတယ်” “ေAးပါ နှင်းပွင့်ဖြူ ငါလာခဲ့ပါ့မယ်” သူ ပြန်ပြောလိုက်သည် ။ http://www.. တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်တဲ့ ချစ်သူ...20 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ ဒီလိုနဲ့ ဒီနှစ်လည်း သူAတန်းခေါင်းဆောင်လုပ်ရပေUီးမည်။ Aသင်းလေးသင်းလည်း ဖွ့သဲည်။ Aနီ Aစိမ်း Aပြာ A၀ါ တဲ့ ။ နှင်းပွင့်ဖြူလေးက Aနီရောင် Aသင်းခေါင်း ဆောင်ဖြစ်သွားသည်။ နှလုံးသားကို . နီစွေးစွေး နှလုံးသားတစ်ခုနဲ့... Aနီရောင်ကြက်ခြေခတ်နဲ့... ၀ိUာU်တစ်ခုလုံး သက်ဆုံးတိုင်ထိပေါ့.. မင်းရှေ့ မှာ ငါ.thettantcho...com .... ဒူးထောက်နေတုန်းပေါ့...blogspot.. ဒီဝင်သက်ထွက်သက်က..
com ..thettantcho. ။ မွေးနေ့ပွဲကို လူကိုယ်တိုင်မလာခဲ့၍ ကောင်မလေးက သူ့ကို Aတော်စိတ်ဆိုးသွားခဲ့သည်။ မတတ်နိုင် နာရေးမှလွဲ၍ သာရေးပွဲတွေကို သူသွားလေ့မရှိ ။ သူက ဒီလိုပဲ တိတ်တဆိတ် နေချင်ခဲ့သူပဲလေ ။ လာမည့်Aပတ်တွင် ကျောင်းပေါင်းစုံ သိုင်းပြိုင်ပွဲရှိသည်။ သူလေ့ကျင့် ရUီးပေမည် ။ ရေမိုးချိုး၍ ကျူရှင်ချိန်နီးလာပြီဖြစ်၍ Aမြန်တက်သုတ်ရိုက်ခ့သဲည်။ မိုးတွင်းဆိုထီးဆောင်လေ့မရှိသော ကြည်လင်သန့်စင်နေသည်။ လမ်းချိုးလေးတစ်ခုနားကို သူ့Aဖို့ ကောင်းကင်ကို လွယ်Aိတ်ကိုလယ်ွပြီး ရောက်တော့ ကျူရှင်ဖက်ကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ လျောက်လာခဲ့သည်။ ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းကြောင့် ခြေလှမ်းတို့ ဆက်မလှမ်းနိုင်တော့ ။သူသိပ်ချစ်ရသော ကောင်မလေး နှင်းပွင့်ဖြူနှင့် ဘေးနား မှာ ကောင်လေးတစ်ယောက် ဒီကောင်လေးကို သူသိသည်။ ရယ်ရယ်မောမောနှင့် သူတို့နှင့် ယှU်တြွဲ ပီးလျောက်သွားကြသည် တစ်ရပ်ကက်ွကျော်က ။ လူမိုက်လက်သစ်လေး ကျော်ဇေယျာဝင်းတင့် ဆိုသူဖြစ်သည်။ ကျူရှင်ပင်တက်ချင်စိတ်မရှိတော့ ။ သူတို့ နောက်ကပဲ တိတ်တိတ်လေး လျောက်လာခဲ့မိသည်။ နှင်းပွင့်ဖြူက စကားပြောရင်း နောက်လှည့်ကြည့် လိုက်တော့ ကျနော့ကို တွေ့သွားပုံရသည်။ http://www..blogspot.21 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ နှင်းပွင့်ဖြူ၏ မွေးနေ့ပွဲသို့ ရောက်လာခဲ့သည်။ ရောင်စုံမီးတွေကြားမှာ နှင်းပွင့်ဖြူလေးက နတ်သမီးတစ်ပါးပေါ့ ။ Aမှန်တော့ လူတွေ ရှပ်သော ပွဲတွေကိုသူ သွားလေ့မရှိပေ ။ သူသိပ်မြတ်နိုးရသော ကောင်မလေးမွေးနေ့မို့သာ ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် သူ့မိဘ Aသိုင်းA၀ိုင်းက လူတွေကများနေသည်။ သူနှင့် Aရွယ်တူဆိုလို့ ကျောင်းသူလေး ၄ ယောက်သာ ထိုင်နေသည် ။ သူလည်း တိုက်ခြံဝန်းကြီးကိုကြည့်၍ ၀င်ချင် စိတ်မ၇ှိတော့ ။ ဒါကြောင့် သူတို့ခြံထကဲခြံစောင့်Uီးလေးကြီးကို လှမ်းခေါ်၍ သူယူလာခဲ့သော မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးကို ပေးခိုင်းလိုက်သည်။ တန်းဖိုးAားဖြင့်တော့ ဘာမှ Aဖိုးမတန်သော Aရာတစ်ခု ။ ချစ်သူAတွက် ကဗျာ တစ်ပုဒ်နှင့် နှင်းဆီဖြူလေးတစ်ပွင့် ။ ဒီထက်တော့ ဘာမှ မပိုခဲ့ပါဘူး ။ ဒီနောက်ပိုင်းတော့ Aိမ်ကြီးကို တိတ်တဆိတ်ကျောခိုင်းကာ ထွက် လာခဲ့သည်။ သူက ကောင်မလေး မျက်နှာလေး မြင်ရယုံန့တဲင် ကျေနပ်နေတတ် ခဲ့သည်ပဲလေ .
thettantcho.....blogspot.." ကျနော်တို့ စကားပြောနေခိုက် ကျော်ဇေယျာဝင်းတင့်ရောက်လာသည်။သူက " ဘာလဲနှင်း နှင်းကို လိုက်နှောက်ယှက်နေတဲ့သူလား" " မဟုတ်ဘူး ကျော်ဇေယျာ သူကသက်တန့်တဲ့ ငါတို့Aခန်းက ငါ့ သူငယ်ချင်း ငါသူနဲ့ ရှင်းစရာရှိသေးတယ် နင်သွားနှင့်" " Aိုကေနှင်း လိုAပ်ရင် ကိုယ့်ကို ခေါ်လိုက် ကိုယ်ကျူရှင်မှာ ရှိနေမယ်" သကောင့်သားက ပြောပြီး ကျနော့ကို ဘုကြည့်ကြည့်ကာ လှည့်ထက်ွသွားသည်။ " နေစမ်းပါUီး သက်တန့် နင်ကဘာလို့ ငါ့မွေးနေ့ကို မလာရတာလဲ ရှင်း Aဲဒါကို Aခုရှင်း " " ဟို..ဟို.com .....နင်သိပ်ရွှီးမနေနဲ့ ပြန်လှည့်ပြန်သွားတာတဲ့ . ငါကိစ္စလေးတစ်ခု ရှိလို့ပါဟာ ငါတောင်းပန်ပါတယ်နော် ဆီးနှင်းဖြူ" " ငါ့ကို နာမည်Aမျိုးမျိုးခေါ်မနေနဲ့ ခြံစောင့်Uီးလေးက ငါ့ကို တစ်မျိုးပဲခေါ် Aကုန်ပြောပြီးပြီ နင် ဟွန်း လာပြီးမှ ဒါပဲနော်.နောက်တစ်ခါဆို နေသေပြီသာမှတ်ဒါပဲ" ပြောပြောဆိုဆို ချာကနဲနောက်သို့ ပြန်လှည့်သွားသည်။ http://www..22 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ ကျနော့ဆီသို့ နောက်လှည့်ပြီး ပြန်လျောက်လာသည်။ " သက်တန့် နင်နဲ့ ရှင်းစရာရှိတယ်" " ဘာတုန်း နှင်းပွင့်ဖြူရဲ့ ငါပိုက်ဆံလည်း မချေးမိပါလား " " နင်ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်မနေနဲ့နော် သက်တန့်" " .......
.. ဒါနဲ့ နင့် ကဗျာလေးAရမ်းကောင်းတယ် ကျေးဇူးနော် " ဆိုပြီး လှစ်ကနဲပြေးထွက်သွားသည်။ AဲဒီAခိုက်မှာပဲ ...ငါက ငုတ်တုတ်ကြီးများ သတိလစ်သွားတာလားလို့ ဟွန်း..blogspot. (၆) ကျူရှင်မှAပြန် မိုးကရုတ်တရက် လမ်းလျောက်လာနေကြမို့ လမ်းချိုး တစ်ခုသို့ တွေ့လိုက်ရသည် ၀ုန်းကနဲရွာ ချလိုက်သည်။ တစ်ယောက်တည်းပဲ ကွေ့ကာနီးတွင် ။ စိတ်ထမှဲ လမ်းကွေ့လူပြတ်နေရာတွင် သူလည်း မိုးရွာထဲမှာ တိတ်တဆိတ်လျောက်လာနေမိသည်။ Aန္တရာယ်၏ Aငွေ့Aသက်တစ်ခုကို ကုက္ကိုလ်ပင်ကြီး တစ်ပင်ရှိသည် ။ ထိAပင်ကြီးေAာက်တွင် သူနှင့်ရယ်ွတူလေးယောက် ပေစောင်းစောင်းနှင့်သူ့ကို ကြည့်နေ သည် ။ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ပဲ လမ်းကို လျောက်လာခဲ့သည် ။ ထင်သည့်Aတိုင်းပင် သူတို့ Aရှေ့မှ ဖြတ်လျောက်တော့ လေးယောက်စလုံး သူ့ရှေ့မှ ပိတ်ရပ်လိုက်ကြသည် ။ Aဲဒီထကဲတစ်ကောင်က ကျူရှင်မှာ တွေ့ခဲ့သည့် " ကျော်ဇေယျာဝင်းတင့်” ဆိုသူ ဖြစ်သည် ။ http://www. ကမ္ဘာမြေAနှံ့မှာ .....thettantcho..... တေးသွားတွေကြားနေရတယ်...23 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ ယိမ်းခါလိုက်သော Aရှိန်ကြောင့် ဆံနယ်ွတို့က မျက်နှာနားမှ ၀ဲသွားသည်။ သင်းပျံ့သော ချစ်သူရဲ့ ရနဲ့တစ်ခု ။ သူမျက်လုံးလေး မှိတ်နေမိသည်။ နှင်းပွင့်ဖြူ သွားပြီAထင်နှင့် မျက်လုံးကို ဆက်မှိတ်ထားလိုက်သည်။ ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ကို စိုက်ကြည့်နေသော ကောင်မလေးကို တွေ့လိုက်ရသည်။ "ေAာင်မလေး.. ဒီရင်ဘတ်က နိမ့်ချည်မြင့်ချည်...... သိပ်..... ချစ်သူရဲ့ သင်းရနဲ့ တစ်ခုနဲ့." xxxx " တယ်.com .. ၀ိညU်တစ်ခု လွင့်ပါးသွားတယ်..တော်သေးတာပေါ့. ဆီးနှင်းတွေပြိုကျ... ဆီးနှင်းဖြူရယ်......
blogspot.24 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ ထိုသူကပင်စ၍ “ ဒီမှာ ဘော်ဒါ မင်းက နှင်းလေးကို လိုက်နှောက်ယှက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကောင်လား” “ နေပါUီး မင်းမေးတိုင်း ငါက ဖြေရမှာလား” “ ဟဟ..com . ဘယ်တုန်းက သူ့နာမည်သူပေးလိုက်သလဲ မသိ ) “ ကဲ ကြာပါတယ်ကွာ ဘော်ဒါတို့ရေ စလိုက်ကြရေAာင်” “ ခွပ်” စကားပင်မဆုံးသေး သကောင့်သား ပက်လက်လန်သွားသည် ။ ဟုတ်တယ်လေ သိုင်းပြိုင်ပမွှဲမဟုတ်တာ တိုက်စစ်တွေခံစစ်တွေ မစU်းစားနိုင်တော့ ။ မျက်နှာကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် တွယ်ထည့်လိုက်သည် ။ “ ၀ှီး” “ ခွပ်” နောက်တစ်ကောင်က တုတ်နှင့် ၀င်Aရိုက် ခေါင်းကို Aသာငုံ့ပြီး မေးစေ့ကို လက်ဖမိုးနှင့် ပင့်တင် ပေးလိုက်သည် စကေဘာနှင့် ။ ၀င်ထိုးသည် သွားရှာပြီတစ်ကောင် ။ ။ သူ့ထိုးချက်ကို ပစ်ထည့်လိုက်သော Aုတ်ခဲ့Aကျိုးကြောင့် ကျနော်သွေးတွေနှင့် လဲကျသွားတာမြင်တော့ ထိုစU် တစ်ကောင်က ရှောင်လိုက်စU်မှာပင် Uီးခေါင်းတစ်ခုလုံး လေးယောက်စလုံး လှစ်ကနဲ နောက်မှ ပူထူသွားသည် ။ ကြောက်Aားလန့်Aား ထွက်ပြေးသွားကြသည် ။ သတိမလစ်ေAာင်ထိမ်းရင်း လမ်းမှာ လာသည့် ဆိုက္ကားကို တားကာ ဆေးခန်းသို့လစ်ခဲ့သည် ။ Aကျိုးဆက်ကား လေးချက်ချုပ်လိုက်ရသည် ။ http://www..thettantcho. ချာတိတ်က Aလာကြီးပါလား မင်းင့ါကို မသိသေးဘူးနဲ့ တူတယ် ငါ့နာမည် လက်မရွံ့ဇေယျာတဲ့ မှတ်ထားUီးချာတိတ်” (ေAာ်ဒုက္ခ ဒုက္ခ .
25 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ Aင်း ဒီတိုင်းဆို ကျောင်းပေါင်းစုံ သိုင်း ပြိုင်ပွဲတောင် ၀င်ပြိုင်နိုင်ပါ့မလား ။ Aိမ်ရောက်တော့ ချော်လဲ၍ ချုပ်လိုက်ရသည် ဟုလိမ်ပြောလိုက်သည် ။ Aိမ်က သိပ်တော့မယုံချင် ။ သို့သော်ကိုယ်က ရန်တွေဘာတွေ Aချိန်တိုင်း ဖြစ်နေတတ်တ့သဲူမ ဟုတ်၍ မယုံချင့်ယုံချင်နှင့် ယုံလိုက်ကြသည် ။ ဒီလိုပါပဲ ဘ၀မှာ လူသားတိုင်း Aနဲဆုံး တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ လိမ်ဖူးသောသူချည်းပင် ။ ခေါင်းကတစ်ဆစ်ဆစ်ကိုက်လာသောကြောင့် ဆေးတစ်ခွက်သောက်ပြီး Aိပ်ရာထဲမှိန်းနေလိုက်သည် ။ ပူပြင်းမှုက. စူးရှAက်ကစွဲာ ...... တစ်ဝက် တစ်ပျက်နဲ့.. ကောင်မလေးရေ. နှုတ်ယူသွားတယ်.. ပွင့်ဖတ်ဖြူဖြူလေးတွေ... ငါ့လိပ်ပြာတွေတောင်....thettantcho..blogspot...... တရိပ်ရိပ်..... ဒီရင်က လွမ်းဆွတ်မှုတွေက. ဒီကန်ရေပြင်မှာ. ဒီလိုသွေးမပျက်ချင်ဘူး.......com .... ဆောင်းငွေ့ဝေတဲ့ မနက်ခင်းဆို............... မိုးစက်လေးတွေကျီစယ်တိုင်း... (သက်တန့်ချို) http://www. AစီAရီပြန့်ကျဲနေကျပေါ့... နှလုံးသားထက်ထက်မှာ...
. ဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာတာလဲ” “Uုံဖွဆိုပြီးတော့ ရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဟ ဒီလိုပဲ စုံစမ်းရင်းနဲ့ရောက်လာတာပေါ့ နင်ရန်ဖြစ်တယ်ကြားလို့ နောက်ပြီး နင့်ကိုလည်း ရှင်းပြစရာလေးတွေ ရှိလို့” “ ဟ ရှုး တိုးတိုးလုပ်ပါဟ Aိမ်ကိုလိမ်ပြောထားတာ” “ ဟီးဟုတ်လား” “ လာဟာ AေAးဆိုင်သွားရေAာင်” “ ဟဲ့နင်လိုက်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား ခေါင်းမှာ ဒါဏ်ရာကြီးနဲ့ဟာကို” “ ဖြစ်ပါတယ်ဟာ . Aမေေ၇...နင် ..thettantcho..com .သား” “ ဟုတ်ကဲ့” http://www...blogspot...26 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ (ရ) “သားရေသက်တန့် Eည့်သည်လာတယ်ဟေ့” Aိပ်ပျော်လုဆဲဆဲမှာပင် လာခဲ့သည်။ လှမ်းေAာ်သံကြောင့် Aိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ဟိုကောင်တွေပြဲ ဖစ်မှာပဲဟု မျော်လင့်မထားသော တွေးပြီးထ မြင်ကွင်းကြောင့် ကြက်သေသေသွားမိသည် ။ “ နှင်းပွင့်ဖြူ” သူမ သူ့Aိမ်ရှေ့မှာထိုင်ရင်း သူ့ကို ပြုံးပြနေသည် ။ “ နှင်း.နှင်းပွင့်ဖြူ . Aပြင်သွားလိုက်Uီးမယ်” “ေAးေAး မိုးမချုပ်စေနဲ့နော်..
.... ၀ထ္ထုတွေထဲကလို မျိုးလုပ်ကြည့်လိုက်တာ ဟီး မင်းသမီးက ပိုက်ဆံနဲ့ Aရာရာကို ဖြေ၇ှင်းနိုင်တယ်လို့ ထင်နေတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ပေါ့ စိတ်ထမှဲာတော့ Aဲဒီလိုကျောချင်တ့စဲိတ် ပိုင်းချင်တဲ့စိတ်တွေ ငါ့မှာ လုံးဝမရှိပါဘူးဟာ Aဲဒါငါနင့်ကို မရှင်းပြရမချင်း နေလို့မတတ်လို့ Aခု တမင်တကာလာ ရှင်းပြတာ နင်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါနော် သက်တန့်” http://www.. ဟို ငါ့ကို နင်ရိုင်းတယ်လို့များမထင်ဘူးလား” “ ဘာလို့တုန်းဟ” “ ဒီလိုလေဟာ နင်နဲ့ငါစတွေ့တုန်းက ငါက နင့်ကို လျော်ကြေးပေးမယ်ဆိုပြီး ပိုက်ဆံပေးတဲ့ ကိစ္စလေ Aဲဒါငါနင့်ကို ရှင်းပြချင်လို့ . နင်ငါ့ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ” “ ပခုံး နှစ်ဖက်ကြားခေါင်းပေါက်နေတဲ့ သတ္တ၀ါပေါ့ဟ” “ Aာ .နောက်တောက်တောက်န့ေဲနာ်.Aဲဒီနေ့က ငါကျောင်းAပ်ပြီးAပြန်ပေါ့ ငါ့Aဖေက Aစိုးရ၀န်ထမ်းလေ ဒီကိုပြောင်းလာရတော့ ငါလည်း ကျောင်းလိုက်ပြောင်းရတာ Aမှန်က ငါကျောင်းလုံးဝမပြောင်းချင်ဘူးဟ ဟိုမှာ သူငယ်ချင်းတွေAများကြီး ငါ့Aချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေလည်း ရှိတယ် Aဲဒါ Aိမ်န့ငဲါနဲ့ တိုက်ပြွဲ ဖစ်နေတာ ဒေါသလည်း ထွက် စိတ်လည်း ညစ်နေတဲ့Aချိန်ဟာ AဲဒီAချိန်နင်နဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်တော့ ငါလည်း စိတ်ထမှဲာမရှိပဲ ဟိုလေလာ ဟို.blogspot.thettantcho..27 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ ဒီလိုနဲ့ သူနှင့် နှင်းပွင့်ဖြူ AေAးဆိုင်လေးသို့လျောက်လာခဲ့သည် ။ “ သက်တန့် နင်ဘယ်သူတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်တာလဲ” “ ဒီလိုပါပဲဟာ ရုပ်ဖြောင့်တော့လည်း လူတိုင်းက မနာလိုကြတာပေါ့” “ ကောင်စုတ်Aကောင်းမေးနေတဲ့ဟာကို ဟွန်း” “ မသိချင်ပါနဲ့ဟာ ဒီလိုပါပဲ ဒါနဲ့ နင်ရှင်းပြစရာရှိတယ်ဆို ဘာလဲပြောပါUီး” “ ဟို ဟို.com .
နဲ..‘ .” မျက်နှာလေး က ချက်ချင်းနီရဲတက်လာသည် ။ပြီးနောက် လှစ်ကနဲ ပြေးထွက်သွားသည် ။ ထိုAခိုက် ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီမှာ ၀ဲပျံတက်သွားကြသည် ။ သစ်ရက်ွတွေက နီညိုရောင်တိမ်စိုင်တွေက လေတစ်ချက်ဝှေ့လိုက်တော့ ကလေးဆန်စွာ ကောင်းကင်မှာ ဆော့ကစားနေကြသည် ။ ချစ်ရသူနဲ့ စကားတွေပြောပြီး မျက်နှာလေးကို ဘေးတိုက်ခိုး ခိုးကြည့်ရသည်မှာလည်း ကဗျာဆန်လှသည် ။ နှလုံးသားတွေ နွေး..blogspot...၁ ကိုယ်စားပြုပြီးဝင်ပြိုင်ရခြင်းဖြစ်သည် ။ ပြိုင်ပမွဲ စခင် ၁ နာရီAလို နှင်းဆီဖြူနှင့်တွေ့သည် ။ “ သက်တန့် နင် ...ငါလေနင့်ကို..’ တုန်းက နင်ငါ့ကို Aတော်၇တဲာပဲဆိုပြီး စိတ်ဆိုးသွားမှာပဲနော် ဟုတ်လား” “ Aာ....” http://www....ဒီကောင် ဘာတွေပြောသွား. စာမေးပွကဲနီးနေပြီ တော်ကြာနင်တစ်ခုခု ဖြစ်ရင်..............28 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ စကားတွေAများကြီးပြောပြီး တတွတ်တွတ်၇ှင်းပြနေသော ကောင်မလေးကို ကြည့်ရင်း သူပြုံးလိုက်မိသည် ။ “ နင့်မျက်နှာကို ငါသိပါတယ်ဟ ကြည့်ကတည်းက Aဲဒီလို နင်Aဲဒီတုန်းက လူကြားထဲမှာ ရှက်ရမ်းရမ်းလိုက်မှန်းလည်း သိတယ် ဒါနဲ့ လူတစ်ဖက်သားကို မလုပ်တတ်မှန်း ရန်ဖြစ်တာကို ဟို.ပေါ့ ။ (၈) ဒီနေ့သိုင်းပြိုင်ပွဲစပြီ ။ေAခန်းကိုယ်စားပြု သူဝင်ပြိုင်မည်ဟု စာရင်းပေးလိုက်သည် ။ ဆရာဝန်၏ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ကြောင်းလက်မှတ်ပါ ပူးတွတဲင်ပြလိုက်သည် ။ သူက Aထက........က....နင့်ကို ရှက်လို့ လည်းပြန်တောင်းပန်ရUီးမယ် .com ....သတိထားUီးနော်...ဟို.” “ တစ်ခုခုဖြစ်တော့ ဘာဖြစ်တုန်း ဆီးနှင်းဖြူရဲ့” “ .......thettantcho...
...၆ ကကိုး ။ သူ့ကို တွေ့လိုက်သည်နှင့် ဟိုကောင် မျက်စိမျက်နှာပျက်သွားသည် ။ ဒိုင်လူကြီး၏ ခရာသံဆုံးသည်နှင့် သားရဲတစ်ကောင်လို သူ့ကို Aတင်းဝင်တိုက်တော့သည် ။ သူကတော့ သွေးေAးေAးပင် ။ ဒီကောင့်Aမှားကို စောင့်နေလိုက်သည် ။ ထိုAခိုက် လူAုပ်ကြားထဲမှာ ဆီး..၂ နှင့် ထ.နှင်း.ဖြူ...thettantcho..၆ ၊ ထ...29 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ ဘယ်ဖက်ရင်Aုံတစ်ခြမ်း နွေးကနဲဖြစ်သွားသည် ။ “ေAးပါဟာ ငါသတိထားမှာပါ” ပြိုင်ပွဲက ကျောင်း ခြောက်ကျောင်း ရုံးထွက်ဖြစ်သည် ။ မဲနှိုက်တော့ ထ.၆ ။ ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ တစ်ဖက်လူကိုကြည့်လိုက်တော့ ဟိုကောင် ကျော်ဇေယျာဝင်းတင့်ဆိုသူဖြစ်သည်။ေAာ်...ဖြူ ။ မင်းAသံလေးနဲ့တင် လုံလောက်ပါတယ် ကောင်မလေးရယ် .လေး ။ သူ့ကို ငေးကြည့်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ သူကောင်မလေးကို လက်သီးကို သတိလက်လွတ် ရုတ်တရက် တစ်ချက်ငေးကြည့်မိတုန်း ရှောင်ချိန်မ၇လိုက် ။ လူက ရိပ်ကနဲဝင်လာသော Aမှောင်ကမ္ဘာထဲ ခေတ္တရောက်သွားသည် ။ နားထဲမှာေAာ်ခေါ်သံ တွေကြားနေရသည် ။ “ သက်တန့် သက်တန့်.၅ နှင့် ။ ဒီတစ်ချီလည်း ခပ်မြန်မြန်ပင် ပြွဲ ပီးသွားသည် ။ နောက်ဆုံး ဖိုင်နယ် ။ သူနှင့် ယှU်ပြိုင်ရမည်က ထ.. ။ http://www..Aီး...ဟီး.၁ နှင့် ထ..၄ ၊ ထ. ဒီကောင်က ထ. ၃ နှင့် ထ..” ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ သူ့ကိုတတွတ်တွတ် ပြောနေသော ဆီး.၅ တို့ ယှU်ပြိုင်ရမည် ဖြစ်သည် ။ ဒိုင်လူကြီးမှ ၀ီစီသံပေးသည်နှင့် တစ်ကိုယ်လုံး ရှိ AကြောAချင်တို့ကို လျော့ချပစ်လိုက်သည် ။ တစ်ဖက်လူ၏ တိုက်ကက်ွကို မမှိတ်မသုံ လိုက်ကြည့်လိုက်သည် ညိုသကြီးနှင့် ။ လှစ်ကနဲဝင်လာသော ဆီးခံပေးလိုက်သည် ။ နဲနဲတော့ ညာခြေကို ဘယ်ဖက် Aီသွားပုံရသည် ။ တော်ရုံရမ်းပြီးဝင်မလာရဲတော့ ။ ဆတ်ကနဲ မေးရိုးကို ညာဖြောင့်လက်သီး ပစ်ထည့်လိုက်သည် ။ သကောင့်သားက ခေါင်းငုံ့ပြီးရှောင်သည် ။ ကြိုက်သည်ပေါ့ သိပ်မပင်ပန်းလိုက်ရပဲ ၀င်လာသည် ။ ငုံ့ရှောင်လိုက်သော လိုချင်သည့်Aကွက်ထဲ မျက်နှာကို ဒူးခေါင်းတစ်လုံး ပစ်ထည့်ပေးလိုက်သည်။ ပွဲက ဒီမှာတင် ပြတ်သွားသည် ။ နောက်တစ်ဆင့်ယှU်ရမှာက ထ.blogspot..com .နှင်း.ထပါသက်တန့်ရဲ့..
.၆ ကို Aရေပြုတ်သောက် မကွ ... ။ လျှင်မြန်လနွ်း သောကြောင့်တစ်ချို့က သဲသဲကွကွဲမဲမြင်လိုက်ရ ။ သူ့Aချိန်Aဆကို သူသိသည် ။ ဒီလောက်ဆိုဒီကောင် ၃ ပါတ်လောက်တော့ AနားယူရUီးမည် ။ " ဝေး.. ။ သူနှင့် ဆီးနှင်းဖြူလမ်းမှာဆုံမိသည် ။ ဆီးနှင်းဖြူက သူ့ဆီတည့်တည့်လျောက်လာသည် ။ နောက်ဘာမှမပြောပဲ သူ့မျက်နှာကို Aကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေခဲ့သည် ။ http://www..ထ." ကျောင်းသားတွေဝမ်းသာAားရထခုန်ကြသည် ။ သူလူAုပ်ကြားတွင် ဆီးနှင်းဖြူလေးကို ရှာဖွေမိသည် ။ သို့သော် သူမကို ရှာမတွေ့တော့ပေ ..... ၆. ။ Aခုရက်ပိုင်း သိုင်းပြိုင်ပွဲပြီးကတည်းက ဆီးနှင်းဖြူက သူ့ကို ရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ် လုပ်နေသည်။ သူကတော့ စာမေးပွနဲီးလာ၍ စာကျက်နေသည်ဟုပင် ဖြေတွေးလိုက်သည် ။ သူမကို ကျူရှင်မှာလည်း မတွေ့ရတော့ ။ ဂိုက်ဌားပြီးစာကျက်နေသည်ဟု သူမသူငယ်ချင်းများမှတဆင့် သိရသည် ။ တစ်ရက်သော ညနေခင်းလေးမှာပေါ့.....30 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ “ ၄ ..blogspot.” ရှိသမျှ AားAင်ကို ယူ၍ သူရပ်လိုက်သည် ။ တဖက်လှည့်၍ေAာင်ပွဲခံနေသော ဟိုကောင် သူထလာ၍ ဒေါသထွက်သွားပုံရသည် ။ သူAမြန်ဆုံး စိတ်ကို စုစည်းလိုက်သည် ။ (၈) ခင်ဗျားက Aလျော့ပေးခြင်းဆိုတ့Aဲရာနဲ့ မထိုက်တန်ဘူး ကျော်ဇေယျာဝင်းတင့်ရေ.com ... ၇.. သတိထားပေတော့ ။ ဒိုင်လူကြီး၏ ခရာသံဆုံးသည်နှင့် ထုံးစံAတိုင်း ။ သကောင့်သားက သဲ ကြီးမဲကြီးဝင်တိုက်သည် ။ ညာလက်သီးဖြောင့်ထိုးသည် ။ သူကဘယ်လက်သီးနှင့်ဆီးခံသည် ။ ဘယ်ခြေနှင့်ကန်သည် ။ သူက ညာခြေနှင့်ပြန်ခံသည် ။သူ ရုတ်တရက်ပြေးဝင်ပြီးဒီ ကောင့်ဒူးပေါ်ခုန်တက်လိုက်သည် ။ ပထမတော့ ဒီကောင်ကြောင်သွားသည် ။ သို့သော် Aရမ်းကို နောက်ကျသွားပြီဖြစ်သည် ။ သူ့ဒူးခေါင်းက ဒီကောင့်ရင်ညနွ့်ဆီသို့. ၅.၁ ကွ... သက်တန့်ကွ ဟေ့ကောင်တွေမင်းတို့ ထ......thettantcho...
.....။ ဒီလိုနဲ့စာမေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့ကြီးကိုေAာင်ေAာင်မြင်မြင်ဖြေဆိုပြီးစီးသွားလေပြီ ။ ခုချိန်မှာ သူAတွေ့ချင်ဆုံးက ဆီး.. နင်သိုင်းပြိုင်ပတွဲုန်းက လဲကျသွားတုန်းက.....နှင်း...ကို .မ.......လေး.... ငါဘယ်လောက်ရင်ပူခဲ့ရသလဲ...blogspot.thettantcho...နင့်ကြောင့်ငါညညလည်းစာကျက်မရဘူး နင့်ကိုငါမ ခေါ်ချင်တော့ဘူး" သူ့ရင်ထဲမှာ သိမ့်ကနဲခံစားသွားရသည် ။ " နင်ကဘာလို့စာကျက်မရတာလည်း ငါကကြမ်းပိုးယောင်ဆောင်ပြီး နင့်ကို လာကိုက်နေလို့လားဟ" သူ ရယ်ကျဲကျဲဆိုလိုက်တော့ ကောင်မလေးက မျက်နှာပိုစူပုပ်လာပြီး " နင်ကပြောင်စပ်စပ်လုပ်နိုင်သေးတယ် ဟွန်း .31 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ "သက်တန့် နင့်. ငါမခေါ်တော့ဘူး" ဗုဒ္ဓေါ ..ရုတ်တရက်ကြီးပြောလာ၍ သူဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ ။ "ဘာဖြစ်လို့တုန်း ဆီးနှင်းဖြူရဲ့...........ကောင်စုတ်" ဟုဆိုကာလက်သီးဆုပ်ကလေးတွေနှင့် ထုသည် ။ နှလုံးသားထဲထိရောက်လာသည်ဟု ထင်ရသည် ။ ကောင်...." " နင်ကငါစိုးရိမ်ရေAာင် Aမြဲလုပ်တယ်.ရယ်..ဖြူ ။ ကျောင်းတစ်ခုလုံးနှံ့ေAာင်ရှာပြီးပြီ ။ သို့သော်သူမကို Aရိပ်Aယောင်ပင်မတွေ့ရ ။ ရင်ထကဲနဲနလဲည်း စိုးရိမ်ပူပန်လာသည် ။ နောက်ကျော်ငြိမ်းနှင့်တွေ့တော့ http://www.....com ..
...blogspot.. ငါဘယ်လိုAသက်ဆက်ရမလဲ.... Aလွမ်းတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာမို့ပါ . ငါ့ရဲ့.. တွေးခေါ်မှုတွေနဲ့... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx http://www..ဒီလိုန့ပဲ..... ကောင်မလေးရယ်... တောင်စU်ရေမရ.ဒါဏ်ရာတွေက.com ...32 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ "ဟေ့ကောင်သက်တန့် မင်းရဲ့ ဆီးနှင်းဖြူကို သူ့Aိမ်က စာမေးပြွဲ ပီးတာနဲ့ ကားနဲ့လာခေါ်သွားတယ်ကွ ပြဿနာတစ်ခုခု ဖြစ်နေပုံပဲ ရေးကြီးသုတ်ပြာနဲ့" ဟုပြောသည် ။ ဘာတွေများဖြစ်တာပါလိမ့် ။ သူ ဆီးနှင်းဖြူတို့ Aိမ်သို့လျောက်လာခဲ့သည်။ မြင်ကွင်းက မယုံနိုင်စရာ ။ ဆီးနှင်းဖြူတို့Aိမ်လေးက သော့ခတ်ထားပြီး Aိမ်ရှေ့မှ ဆိုင်းဘုတ်လေးက "Aိမ်ရောင်းမည်" တဲ့ ။ ဘာတွေလကဲယွ်..ဒီလိုနဲ့.thettantcho... မင်းက နားမထောင်သွားခဲ့ဘူး............... ဒီရင်ဘတ်ထဲ. ဒီလိုနဲ့.တီးတိုးပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုတောင်.... မကျီစားကြပါနဲ့.
..... Aချိန်နာရီတွေ ခဏရပ်တန့်သွား၏ ။ ရွာချနေသော မိုးရေတို့ ခေတ္တရပ်တန့်သွားကြသည် ။ သက်ရှိသက်မဲ့Aားလုံး ရပ်တန့်သွားကြလေသည်။ သူမ ဆီး..com ..ဒီကို ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ" "ဒီလိုပဲပေါ့" "စာမေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့ကလိုက်ရှာသေးတယ်" " ဒီလိုပဲပေါ့" " Aိမ်တံခါးလည်း သော့ခတ်ထားတယ်" http://www.နှင်း..33 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ ကောင်မလေးနဲ့ မတွေ့ရတဲ့ရက်ပေါင်း ၁၅၀ မြောက်မှာပေါ့....blogspot.ဖြူ ။ သူဆွံAစွာငေးကြည့်နေမိစU်မှာပင် " ဘယ်လိုလဲ ကိုယ့်ဆရာရဲ့ AေAးမိမှာ မကြောက်ဘူးလား ဘယ့်နှယ့်မိုးရေထဲ ဇိမ်ခံနေရတာတုန်း " " ဆီးနှင်းဖြူ ဒီ. ။ သူတစ်ယောက်တည်း Aင်းလျားကန်ဘောင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီး ကဗျာရေးနေမိသည်။ ထိုAခိုက် လေပြင်းတွေက နဲနဲ ပြင်းလာသည်။ မိုးစက်မိုးမှုန်တို့က မျက်နှာပေါ်ကျရောက်လာသည်။ ကဗျာစာAုပ်ကို ပိတ်ကာရင်ခွင်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်သည်။ ကောင်းကင်ကိုမော့ကာ မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်ပြီး မိုးစက်မိုးမှုန်တို့၏ Aရသာကို နှစ်သက်စွာ ခံယူနေမိသည်။ ရုတ်တရက် Aာရုံတစ်ခုကြောင့် မျက်လုံးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ထီးဖြူဖြူလေးတစ်လက် သူAံ့သြစွာနောက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့.thettantcho..
... " " သိသားပဲ" " ဟင်.....blogspot.34 ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ " ဒီလိုပဲပေါ့" " Aရမ်းချစ်တယ် ဆီးနှင်းဖြူရယ်... ။ သက်တန့်ချို http://www..com .. ဘယ်လိုလုပ်သိရတာတုန်း" " ဟွန်း.....ဒါဆို " " ဒီလိုပဲပေါ့ " ပြောပြီး လှစ်ကနဲပြေးထွက်သွားသည်။ ဒီတခါတော့ သူ Aပျောက်မခံနိုင်တော့ ။ ကောင်မလေး လက်ကိုဆွဲပြီး ဒုတိယAကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာပေါ် ရှိAနူးညံ့ဆုံး ကဗျာ တစ်ပုဒ်ကို သင်ကြားပေးလိုက်သည်။ ကဗျာစပ်နေပုံရသည်။ သစ်ကိုင်းပေါ်မှ Aင်းယားရေပြင်ကို ငှက်နှစ်ကောင်က ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီး နှစ်Uီးသားပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ရေပြင်ကြီးက ရှက်နေသည်ထင့် ။ ရွှေAိုရောင်သက်တန့် ကြီးတစ်ခုက ရှက်ပြုံးကြီးပြုံးလို့....သူများပေတံပေါ်မှာ L O V E ဆိုပြီး စာလုံးလေးထွင်းပြီးပေးကတည်းကပေါ့ " " ဟင် ဒါ.thettantcho..
Documents Similar To Yin Htet Htet Ka See Hnin Than
ဂျူး - တိမ်နဲ့ချည်တဲ့ကြိုး
နေလင်းအောင်- ပျောက်ဆုံးနေသော ဝူရှန်သိုင်း (အပိုင်း-၂)
Jouranl Kyaw Ma Ma Lay - Aphyu
Prices_of_educated_person by Myanmar Family Forum
Thit Sar Ni Reviews
Mar Nat Ei Ma Ya Par Thamee
jue - kaung kan ma pa
Juu - Main Ma Nha Yout
Ba Mar Lu Myo Kyi War Da
ရိုဟင်ဂျာ အပိုင်း (၃) ဌေးလွင်ဦး
အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်စရာ ရွှေဒုံးဘီအောင်ရဲ့ ကိုယ်တော့်ကရုဏာပါဝင်သည်။
ပုညခင်- ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မူ
More From lwanthu
မင်းခိုက်စိုးစန် - ပရောမီးသယပ်စ် သေဆုံးခြင်း
MinTheinKha - Short Stories
JUU -- short stories
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ညမဖတ်ရ (သို့) သွေးစုပ်ရောဂါ
Bamaw Tin Aung 1
min khit so san - photu taw pyaw taw pone pyin
ဒေါက်တာဂျိုးကြီး ဖူးပဒေသာ drjoegyixxx
Thu Maung(Love) Novel-signed
လွန်းထားထား - အတောင်ပံတွေ ရှိခဲ့လျှင်
ဂျူး - ကျွန်မ၏ သစ်ပင်
JUU -- Mya yae' La
Jue - kan kya ma koe ma yone kya thu myar
ဂျူး - အ၀ါရောင် ရထား
Juu -- ma taw ta yaw